Kuthetha ukuthini ukuphupha ulila? (Ukulila) Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha ulila?
2 Kunokuthetha ukuthini ukuphupha ulila?
3 Kuthetha ukuthini ukuphupha ndilila?
4 Intsingiselo yokuphupha ubona umntu elila
5 Kuthetha ukuthini ukuphupha usiva okanye ubona isikhalo somhlobo?
6 Intsingiselo yokuphupha ubona usapho lukhala
7 Kuthetha ukuthini ukuphupha ubona umyeni elila?
8 Intsingiselo yokubona umyeni okanye umfazi elila
9 Kuthetha ukuthini ukuphupha ubona i-ex ikhala?
10 Intsingiselo yokuphupha usana lukhala
11 Kuthetha ukuthini ukuphupha umntwana elila?
12 Intsingiselo yokuphupha ngesikhalo somntu wasemzini
13 Kuthetha ukuthini ukuphupha inja ekhalayo?
14 Intsingiselo yokuphupha ulila buhlungu
15 Intsingiselo yokuphupha ulila uphelelwe lithemba
16 Kuthetha ukuthini ukuphupha ndilila ngovuyo?
17 Ngaba ukuphupha ukhala yinto elungileyo?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ulila?
Ukuphupha ukhala kubonisa isidingo sokuvumela ithuku lakho likukhokele kwicala olifunayo. Lixesha lokuba ufumane amava adlulileyo akubonise indlela eyiyo. Eli phupha limela ukusondela kokwenza isigqibo esibalulekileyo kwaye kuyafuneka ukuba unikwe ingqwalaselo.
Iindaba ezizayo ziya kuba zilunge kakhulu kwaye uyifumene yonke le mpumelelo. Iya kuba lixesha elifanelekileyo lokwenza umahluko kubomi babo ngendlela enomdla. Kuqhelekile ukukholelwa ukuba ukulila kuya kuhlala kunentsingiselo embi, kodwa abanye abantu bakhalela izinto ezilungileyo.
Kunokuthetha ukuthini ukuphupha ulila?
Olu hlobo lwamaphupha lubonisa isidingo esikhulu sokujonga ngakumbi kwiimvakalelo ezicinezelweyo. Imalunga nokwenza ingaphakathi lakho ukuba live kwaye ithuku lakho kufuneka lihlale lihlukile. Kubalulekile ukuthatha eli thuba ukwenza yonke into iphele ngeyona ndlela ibhetele.
Iphupha elifanayo linokuba neentsingiselo ezininzi eziya kwahluka kakhulu enye kwenye. Kuya kuba kubalulekile ukuthathela ingqalelo kuzo zonke iinkcukacha ukuze ukutolika kuchane ngokuchanekileyo. Kufuneka ulumke kancinci kwaye ke akukho nto ilunge ngakumbi kunokuqhubeka kwesi sikhundla ukwazi yonke into.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ndilila?
Xa ufuna ukukhetha phakathi kokuhlala ngokufanayo okanye ukuthatha umngcipheko, kubalulekile ukuba umamele intliziyo yakho. Ithuku lakho lilungile kwaye alizukukushiya ezandleni zakho, kuba xa silandela iintliziyo zethu, yonke into iyaphucuka.
Intsingiselo yokuphupha ubona umntu elila
Ubuchule buza kuza kuwe ngentsebenziswano kwaye kuya kuba kubaluleke kakhulu ukuwaxabisa onke la manqaku. Obu buhlobo butsha buya kuba bobobomi kwaye eyona nto iphambili kukusebenzisa olu manyano lutsha ukuze ekugqibeleni yonke into iqhubeke nokusebenza.
Kuthetha ukuthini ukuphupha usiva okanye ubona isikhalo somhlobo?
Ubuhlobo onabo nabahlobo bakho bunokukukhusela nakwamanye amashwa anokwenzeka. Ukuphupha umhlobo wakho elila kubonisa ukuba ngexesha elifutshane uyakufuna uncedo lwabo ukoyisa imeko embi.
Intsingiselo yokuphupha ubona usapho lukhala
Ukhe wanengxaki kwaye uxinzelelo luye lwankqonkqoza emnyango wakho ngamanye amaxesha. Zama ukwamkela ithuba elitsha eliza kuvela, kukudibana kwakhona nesihlobo esikude ngoku.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ubona umyeni elila?
Ukuba wedwa kuhlala kuyinto enzima kakhulu kwaye eli phupha libonisa uloyiko olukhulu lokuba lilolo. Zama ukucinga ukuba ngeli xesha liya kubaluleka ukuze ube nolwazi olungakumbi malunga nawe.
Intsingiselo yokubona umyeni okanye umfazi elila
Iingxaki ziqhelekile emtshatweni kwaye ukuphupha umyeni okanye umfazi ekhala yinto embi. Ukuba awuqali ukujonga ubudlelwane kwaye uzame ukufunda kula manqaku, ukubakho kwento embi eyenzekayo kuhlala kulungile.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ubona i-ex ikhala?
Ixesha elidlulileyo kunkqonkqoza emnyango wakho kwaye ukuvumela ukuba kungene kunokuba nzima kakhulu ukujongana nako. Olu hlobo lwamaphupha lukwathetha ukuba kuya kufuneka umnike ubomi obutsha bezesondo.
Intsingiselo yokuphupha usana lukhala
Into ebaluleke kakhulu ilahlekile kwaye eli phupha libonisa ngokuchanekileyo isidingo sokujonga ngcono ngaphakathi kwakho. Yintoni engazange ibe yeyakho, kuba ukuba ibinayo, ngeyibuyele kuwe.
Kuthetha ukuthini ukuphupha umntwana elila?
Eli phupha lineentsingiselo ezimbini kwaye zahluke kakhulu, eyokuqala lilizwi elibi kwaye ibonisa ubunzima obulapha endleleni. Isalathiso sesibini sinxulumene nokufika komntu omtsha kusapho lwakho.
Intsingiselo yokuphupha ngesikhalo somntu wasemzini
Ukuzazi kufanele kube yinjongo yomntu wonke kwaye ukuba neli phupha kubonisa ukuba awukhange ujonge. Zama ukufunda ezinye iincwadi ezikuvumela ukuba usebenze kula manqaku ngaphakathi kwakho.
Kuthetha ukuthini ukuphupha inja ekhalayo?
Inja inobudlelwane bobuhlobo kunye nokuzinikela nosapho, ke iphupha liya kuhambelana naloo nto. Ukuphupha inja ikhala kubonisa ukuba kuyakufuneka ube noqwalaselo oluninzi kwaye ufune unxibelelwano ngakumbi nabantu abasondeleyo kuwe.
Intsingiselo yokuphupha ulila buhlungu
Ezinye izimo zengqondo onazo kwabanye zinokubenza abantu bazive bambi. Kuya kufuneka ujonge kancinci ecaleni kwakho kwaye ngaphezulu kwayo yonke into ube uthambile kancinci kuwo wonke umntu.
Intsingiselo yokuphupha ulila uphelelwe lithemba
Imvukelo onayo ngobomi obufuna ukuba nayo yinto eyingozi kwaye inokwenza okungaphezulu. Ukuphupha ngokulila uphelelwe lithemba kubonisa ukuba kuyafuneka ukuba ujonge ngaphakathi kuwe kwaye usombulule yonke into.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ndilila ngovuyo?
Zama ukuvumela intuition yakho ukuba ikukhokelele kwicala elifanelekileyo lobomi bakho. Eli phupha limele isidingo sokuhlengahlengisa kancinci kwaye uvumele imvakalelo ithethe kakhulu.
Ngaba ukuphupha ukhala yinto elungileyo?
Yonke iphupha eliza kulumkisa ukuba ingxaki inokuthi yenzeke sele iyinto entle kakhulu. Eyona nto ibalulekileyo kukuthatha eli thuba ukuze yonke into ikwazi ukuphucula kwaye eyona nto ibalulekileyo kukulungiselela yonke into.